बार्टिमुस - विश्वव्यापी चर्च अफ गॉड स्विट्जरल्याण्ड
मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2021-03 > बार्टिमियस
बच्चाहरूले कथाहरू मनपराउँदछन् किनकि तिनीहरू प्रभावशाली र जीवन्त छन्। तिनीहरूले हामीलाई हाँस्न, कराउने, हामीलाई पाठ सिकाउने र यसले हाम्रो व्यवहारलाई प्रभाव पार्छ। प्रचारकहरूले केवल येशू को हुन् भनेर चित्रण गरिरहेका थिएनन् - उनीहरूले हामीलाई उनले के गरे र कसलाई भेट्यो भन्ने कथा सुनाइरहेका थिए किनकि उहाँबारे बताउने थुप्रै कुरा छ।
Bartimaeus को कथा मा एक नजर राखौं। They अनि तिनीहरू यरीहोमा आए। र जब उहाँ यरीहो बाट बाहिर जानुभयो, उहाँ र उहाँका चेलाहरु र एक ठूलो भीड, त्यहाँ बाटोमा एक अन्धा भिखारी, Timaeus का छोरा Bartimaeus बस्यो (मार्क १०:४))।
सबै भन्दा पहिले, हामी देखाइएको छ कि Bartimaeus आफ्नो आवश्यकता थाहा थियो। उहाँले यो बाट लुकाउन कोसिस गर्नुभएन तर "चिच्याउन थाल्नुभयो" (v 47)।
हामी सबैको केवल हाम्रा उद्धारक र मुक्तिदाता, येशू, समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। बार्टिमियसको आवश्यकता स्पष्ट थियो, तर हामी मध्ये धेरैको लागि हाम्रो आवश्यकता लुकेको छ वा हामी सक्दैनौं र यसलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनौं। हाम्रो जीवनमा त्यहाँ त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जहाँ हामीले मुक्तिदाताको सहयोगको लागि पुकार्नुपर्दछ। बार्टिमियसले तपाईंलाई आफैलाई सोध्न प्रोत्साहन दिन्छ: के तपाईं आफ्नो आवश्यकताको सामना गर्न तयार हुनुहुन्छ र उसले जस्तै उसले मदत मागेको छ?
Bartimaeus आफ्नो आवश्यकताहरु को लागी खुला थियो र यो येशू को लागी उनको लागी केहि महान गर्न को लागी बिन्दु थियो। Bartimaeus ठ्याक्कै थाहा थियो उसलाई कसले मद्दत गर्न सक्छ, त्यसैले उसले चिच्याउन थाल्यो: "येशू, दाऊदका छोरा, ममाथि दया गर्नुहोस्!" (पद ४)), मसीह को नाम संग। सायद उसलाई थाहा थियो कि यशैयाले के भनेका थिए: "तब अन्धाहरुको आँखा खोलिनेछ र बहिराहरुको कान" (यशैया ३५: ५)।
उसले उसलाई भन्दै गरेको आवाज सुनेन ऊ शिक्षकलाई परेशान गर्न लायक थिएन। तर उनी चुप लाग्न सकिनन्, किनकि उनी जान्दथे कि यो अझ धेरै चिच्याउन लायक छ: "हे दाऊदका छोरा, ममाथि दया गर!" (मार्क १०:४)। येशू रोकिनुभयो र भन्नुभयो: उसलाई बोलाऊ! हामी पनि भगवान द्वारा माया गरीरहेका छौं, उहाँ रोउनुहुन्छ जब उहाँ हाम्रो पुकार सुन्नुहुन्छ। Bartimaeus थाहा थियो के महत्त्वपूर्ण थियो र के महत्वहीन थियो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उनी आफ्नो लुगा छोडेर येशूकहाँ गए (पद ५०)। सायद उसको लुगा उसको लागी धेरै मूल्यवान थियो, तर उसलाई येशूकहाँ आउन बाट रोक्न केहि थिएन। तपाइँको जीवन मा के चीजहरु छन् जुन साँच्चै महत्वपूर्ण छैन तर तपाइँ धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ? येशूको नजिक जानको लागी तपाइँ कुन चीजहरु लाई छोड्नु पर्छ?
«येशूले उसलाई भन्नुभयो: जाओ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई राम्रो बनाएको छ। र तुरुन्तै उसले देख्यो र बाटोमा उसको पछि लाग्यो verse (पद ५२)। येशू ख्रीष्टको विश्वासले तपाइँलाई आध्यात्मिक रूपमा देखीदिन्छ, यो तपाइँलाई तपाइँको आध्यात्मिक अन्धोपनबाट निको पार्छ र तपाइँलाई येशूको अनुसरण गर्न सम्भव बनाउँछ। बार्टीमायस येशू द्वारा निको भएपछि, उहाँ बाटोमा उहाँको पछि लाग्नुभयो। उहाँ येशूसँगै हिंड्न चाहानुहुन्थ्यो र उहाँको कथाको हिस्सा बन्नुहुन्थ्यो जहाँ यो उसलाई नेतृत्व गर्थ्यो।
हामी सबै बर्तिमैस जस्ता छौं, हामी अन्धा, खाँचोमा छौं र येशूको उपचारको खाँचो छ। आउनुहोस् हामी जे महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई छोड्नुहोस् र येशू हामीलाई निको पार्नुहोस् र उहाँको यात्रामा उहाँलाई पछ्याऔं।